New Caledonia mechiri ebe ọha na eze n'ihi Covid-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » New Caledonia mechiri ebe ọha na eze n'ihi Covid-19
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • New Caledonia Na -agbasa Akụkọ • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
caledonia ọhụrụ mechiri ebe ọha na eze n'ihi covid 19
Ọchịchị Caledonia ọhụrụ enyela iwu ka emechi ebe abalị taa, dịka ebe a na-ere nri, ebe a na-ere nri, ebe a na-ere mmanya, ebe ana-agba agba na ụlọ ịgba cha cha, maka izu abụọ. Ekwuputala ọtụtụ ihe ọhụụ mgbe achọpụtara mmadụ abụọ nwere coronavirus ụnyaahụ.
A ga-amachibido nzukọ nke ihe karịrị mmadụ 20 ma kagbuo mmemme niile dị ka egwuregwu na ụka. A ga-emechi ụlọ akwụkwọ dịka ụlọ akwụkwọ ọzụzụ na mahadum.
Transportgbọ njem ọha na-aga ma na-esi na Loyalty Islands ga-akwụsị. Onye isi oche Thierry Santa gbara ndị were mmadụ n'ọrụ ume ka ha hazie ka a rụọ ọrụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
A gaghị ekwe ka ndị na-abụghị ndị bi banye New Caledonia mgbe a ga-akwụsị ụgbọ njem njem n'etiti New Caledonia na Wallis na Futuna.
Ka ọ dị ugbu a, onye ozi mba ofesi France na Annick Girardin dụrụ ndị mmadụ si n'ókèala ndị France si mba ofesi bi na France ndụmọdụ ka ha ghara ịlaghachi n'agwaetiti ha. Agbanyeghị, ọ kwuru na ndị bi na mpaghara ofesi ndị nọbu na France nwere ike ịlaghachi mana na ha ga-anọrọ onwe ha iche mgbe ha bịarutere. Oriakụ Girardin kwuru na ndị na-ebu ahịa na-emesi obi ike ikuku ndị bụ isi.